स्थानीय स्वादमा रमाउँदै पर्यटक - नेपालबहस
स्थानीय स्वादमा रमाउँदै पर्यटक
| १०:४५:२६ मा प्रकाशित
२८ फागुन,चितवन । जिल्लाको समथर भूभाग छाडेर उत्तरपट्टि कविलासडाँडाको पाखामा रहेको ‘कविलास रिसोर्ट एण्ड फन पार्क’ मा यतिबेला स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक त्यहीँको उत्पादनको स्वाद लिएर रमाइरहेका छन् । तराईको गर्मी छल्दै नारायणगढबाट ४६० मिटर उक्लेपछि पुगिने रिसोर्ट यतिबेला स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको रोजाइ बनेको हो ।
रिसोर्टसँगै चार बिघा जमिनमा कृषिफार्म सञ्चालन गरिएको छ । फार्ममा तरकारी, खसी, स्थानीय जातका कुखुरा, हाँस, टर्की, बट्टाई, माछापालन गरिएको छ । उनका अनुसार अहिले फार्ममा सात हजार स्थानीय जातका कुखुरा, २०० हाँस, ५० टर्की, ५०० बट्टाई, ६० खसी–बोका र चारवटा पोखरीमा माछा पालिएको छ । त्यहाँ पालिएका पक्षीले पारेको अण्डालाई ह्याचिङ मेसिनमा राखेर चल्ला कोरलेर आफैँ हुर्काउने गरिएको छ । खुला ठाउँमा छाड्ने हुँदा ती पक्षीको मासु स्वादिष्ट हुने उपाध्याय बताउछन् ।
फार्ममा आलु, प्याज, साग, धनियाँ, मटरकोसा, मुला, काउली, ब्रोकाउली, करेला, खुर्सानी, बैगुनलगायतका तरकारी फलाइएको छ । फार्ममा मात्रै १० जनाले रोजगारी पाएका छन् । उपाध्यायले भने, “रिसोर्ट र वनभोजका लागि आउनेलाई स्वादअनुसारका यहीँको उत्पादन हामी खुवाउँछौँ ।” सबै उत्पादन प्राङ्गारिक रहेको उनको भनाइ छ ।
रिसोर्टकै परिसरमा छुट्टै वनभोजस्थल छ । यहाँ २५ समूहका लागि छुट्टाछट्टै टहरा ९सेड० व्यवस्थापन गरिएको छ । बिजुली, पानी, वाद्यवादनका उपकरण उपलब्ध छन् । त्यसका अतिरिक्त दुईवटा २०० जना क्षमताका सभाहल पनि वनभोजस्थलमै रहेका छन् । वनभोजसहितको कार्यक्रम गर्नेका लागि उक्त हल उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए । उनले भने, “वनभोज आउन चाहनेका लागि घरबाट ल्याउनेदेखि यहीँको सामानसहित खाना पकाएर खुवाउने र घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ”, उनले थपे, “वनभोज आउन चाहनेले कुनै पनि सामान ल्याउनु पर्दैन, सबै हामीले नै व्यवस्था गरिदिन्छौँ ।” रिसोर्ट नजिकै सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर छ । मन्दिरमा पूजाआजा र विवाहका लागि समेत मानिस पुग्ने गरेका छन् ।
रिसोर्टका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक शुलभ ढकालका अनुसार स्वदेशी र भारतीय पर्यटक धेरै सङ्ख्यामा आउने गरेका छन् । कोभिडपछि गत मङ्सिरदेखि खुलेको रिसोर्टमा क्रमशः पर्यटक बढ्दै गएका छन् । उनले भने, “भारतबाट आएर चारवटा विवाह यहाँ भएका छन् ।” नेपालीहरु पनि विवाहका लागि पुग्ने गरेको उनले बताए । वीरगञ्ज, भैरहवालगायत सीमा क्षेत्रका भारतीय पर्यटक र नेपालका विभिन्न ठाउँबाट पर्यटक आउने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने , “माडवारी समाजका धेरैको रोजाइ यो रिसोर्ट बनेको छ ।” सोझै आउनेभन्दा पहिले नै बुक गरेर आउने बढी भएको उनले बताए ।
राजधानी काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाालगायतका ठूला शहरबाट व्यावसायिक आवासीय कार्यक्रमका लाागि आउने गरेका छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको दासढुङ्गाबाट १।५ किलोमिटर र जुगेडीबाट तीन किलोमिटरमाथि यो रिसोर्ट पर्दछ । त्यहाँबाट त्रिशूली र नारायणी नदीसँगै देवघाट, नारायणगढ र तनहुँका धेरैजसो भूभाग देख्न सकिन्छ । पहाडी कन्दरामा बसेको अनुभूति दिलाउने उक्त रिसोर्टबाट देखिने खोला, खोल्सा र झरनाले पर्यटकलाई मोहित बनाउने गरेको भरतपुर महानगरपालिका–२९ का अध्यक्ष मानबहादुर रानामगरले बताए । उनले भने, “यहाँको पर्यटक प्रवद्र्धन गर्नका लागि यो रिसोर्टले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।”
विभिन्न क्षेत्रका ७२ जनाको रु ६० करोड लगानी रहेको रिसोर्ट कोभिडका कारण प्रभावित भए पनि विस्तारै लयमा फर्किएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यायले भने, “हामीलाई आशा पलाएको छ, यो महिनाबाट खर्च धानेर बैंकको ब्याज तिर्न सक्नेछौँ ।” उनी कृषि फार्म स्थापनालाई भने कोभिडकै उपलब्धि मान्छन् । कोभिडको समयमा मिलेको फुर्सदले कृषि फार्मतर्फ आकर्षित गराएको उनको भनाइ छ । रिसोर्टका सञ्चालक विष्णु ढकाल फरक शैलीमा सञ्चालन गरिएका कारण रिसोर्टप्रति पर्यटकको आकर्षण बढेको बताउछन् । उनले भने, “एकपटक पुगेका पर्यटक दोस्रोपटक आउन चाहन्छन् ।”
चितवनमा मुख्यरूपमा जङ्गल सफारीका लागि पर्यटक आउने गरेकामा पहाडमा रमाउन चाहनेका लागि भने यो रिसोर्ट गन्तव्य बनेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामी छिट्टै यहाँ आउने पर्यटक घुमाउनका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, देवघाट, शाश्वतधामलगायतका पर्यटकीयस्थल जोडेर भ्रमण प्याकेज बनाउँदैछौँ ।” समुद्री सतहबाट ६५० मिटर उचाइमा रहेको रिसोर्टमा पुगेपछि तराईको गर्मी भुल्न सकिन्छ ।
डिजिटल भुक्तानीको लागि एनएमबि बैंकमा ओम्नि च्यानलको प्रवेश १० घण्टा पहिले
आगलागी पीडित पालमुनी रात बिताउन बाध्य ११ घण्टा पहिले
अनेसास कोरियाद्वारा नयाँ वर्षमा बृहत् रचना वाचन कार्यक्रम २ दिन पहिले
अनाथसँग गायिका सरिता भारतीकाे जन्मदिन ४ दिन पहिले
मुस्ताङ जोड्ने सडक थप दुई दिन बन्द २ हप्ता पहिले
रोहिङ्ग्या शिविरमा लागेको भिषण आगलागीमा परी १५ शरणार्थीको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
वालिङ नगरपालिकाको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकार अनुपस्थित २ वर्ष पहिले
मैथिलानी समूहको संस्था सखी बहिनपा दर्ता १ महिना पहिले
पहिरोले घर भत्काउँदा ७२ घरधुरी पालमा ८ महिना पहिले
एनआईसी एशियाले किन तोड्न खोज्यो भद्र सहमति ? त्यो विज्ञप्तीले ल्यायो विवाद ! १ वर्ष पहिले